Soosaarayaasha mashiinka rogroga ee wasakhda wasakhda dabiiciga ah ee jaban iyo warshad | YiZheng
Muxuu yahay Mashiinka Isukeeniya Qashinka Haydarooliga?
Ku Mashiinka Gawaarida Gawaarida Gawaarida Haydarooliga wuxuu nuugaa faa'iidooyinka tikniyoolajiyadda wax soo saarka horumarsan ee gudaha iyo dibaddaba. Waxay si buuxda uga faa'iideysaneysaa natiijooyinka cilmi-baarista ee farsamada sare ee bayotechnoolajiyadda. Qalabku wuxuu isku xiraa farsamada farsamada korontada, korontada iyo korontada ku shaqeysa. Intii ay hawadu hawo siineysay oo ay oksijiin siineysay qalabka nafaqeynta, waxay sidoo kale si sax ah u xakameyn kartaa heerkulka iyo qoyaanka qalabka nafaqeynta si ay uga dhigto qalabka wax lagu nafaqeynayo inuu si dhaqso ah u bislaado, kaasoo asal ahaan buuxin kara shuruudaha soo saarista baaxadda weyn ee bacriminta dabiiciga ah.
Tilmaamaha Qalabka Wareejinta Haydarooliga
1) Ku habboon rogista iyo khamiirka qashinka dabiiciga ah, sida, qashinka dhoobada, dhoobada miraha sonkorta lagu dubo, keega xumaanta xun iyo balka cawska.
2) Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay bacriminta halsano iyo ka saarida howlaha qoyaanka ee bacriminta dabiiciga ah, bacriminta, qashin qubka, koorsada dhirta iyo warshada beerashada Mushroom.
3) Waxaa loo isticmaali karaa halsano qorraxda, haanta halsano iyo mashiinka mobilada, iwm Mashiinka mobilada ayaa ogaan kara mashiin dheeri ah oo loo isticmaalo shaqada.
4) Shiidan iyo qalabkeeda taageera ayaa sidoo kale noqon kara dheecaan joogto ah oo joogto ah.
5) hufnaan, hawlgal siman, xoog leh oo waara, xitaa jeedsada tuur.
6) Golaha xakamaynta dhexe, wuxuu ku guuleysan karaa buugga ama shaqada xakamaynta otomaatiga ah
7) Ku qalabaysan bilow jilicsan, culeyska bilowga bilowgu hooseeyo
8) Ku qalabeysan yahay qalab qaadista hawo-qaadsiiyaha iliga.
9) Xaddid badalka safarka, door doorka nabdoon iyo xaddid.
Mabaadi'da Shaqada ee Qaadista Kaydinta Haydarooliga
Mashiinka ugu weyn ee Qaadista Haydarooliga Qaadista Turner waxay korsataa baangad mindi dheer leh bidix iyo midig muquuninta iyo dhexroor yar oo usheeda dhexe ah, si mashiinku si siman ugu rogi karo maaddada, wuxuu leeyahay awood gaas wanaagsan, qiime jaban oo sareeya iyo iska caabin yar. Qaybta gudbinta waxay qaadataa silsilad ballaadhan oo silsilad wadata, taas oo ka dhigaysa waxtarka korontada mid sareeya, sawaxanka wuu hooseeyaa, hawlgalku wuu deggan yahay, islmarkaana sibiibix ma aha. Qaabka ayaa si buuxda loo xiray, amaan ah oo lagu kalsoonaan karo. Qalabka waxaa si buuxda loogu kontaroolayaa hal sanduuq, taasoo ka dhigaysa mid fudud oo ammaan ah in lagu shaqeeyo.
Soo-saarista Hawada Haydarooliga Turner Video Display
Xulashada Nadiifinta Kumbiyuutarka ee Kombiyuutarka Xulashada
Xawaaraha Socodka (m / min)
Hore: Nooca Crawler Guudmarka Mashiinka Isku-darka Wasakhda Qashinka
Xiga: Haan Hangaraarado Horizontal